Xaqiiqda Aad U Baahantahay Inaad Ka Ogaato Xukunka Maxkamadda Caalamiga Ee ICJ – somalilandtoday.com
Xaqiiqda Aad U Baahantahay Inaad Ka Ogaato Xukunka Maxkamadda Caalamiga Ee ICJ
Xaqiiqda aad u baahantahay inaad ka ogaato xukunka maxkamadda caalamiga ee cadaaladu gaadhey:
In ay dajisey xuduud badeed cusub oo ay yeelanayaan Kenya iyo Soomaaliya (New border that cuts through the disputed area).
In baddii la isku haystey oo cabirkeedu dhamaa ku dhawaad 62000sq miles oo badda hindiya ah intii badneyd loo xukumey Soomaaliya (big chunk of disputed area).
Waxay xukuntey inaaney hore u jirin wax heshiis ah ama wax xuduud badeeda toona ee qoleba dood sheegasho qabtey (Rejected kenya’s claim of pre- existing agreement on parallel boundary).
Kenya inaaney jabin wax heshiis caalaamiya (Rejected Somalia’s claim that Kenya violated international laws).
Ma jiro wadan 💯/💯 guuleystey iyo mid guuldareystey toona (No absolute winner of the disputed area).
Waxaa qoray: M Abdillahi Yonis.